FAAHFAAHIN: Khasaaraha qaraxyadii saaka lala beegsaday Xarunta Dowlada Hoose ee Gaalkacyo | Hangool News
FAAHFAAHIN: Khasaaraha qaraxyadii saaka lala beegsaday Xarunta Dowlada Hoose ee Gaalkacyo
August 21, 2016 - Written by Hangool
Labo Qarax oo is-miidamin ahaa, ayaa Maanta ka dhacay Xarunta Dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo, kaddib markii lagu weeraray gaari laga soo buuxiyay walxaha Qarxa, kaaso Qaraxyada lagu bilaabay.
Qaraxa labaad oo khasaaraha badankiis geystay ayaa dhacay markii ay dad badan oo shacab ahi kusoo xoomeen goobtii uu qaraxii koowaad ka dhacay oo sida la sheegay ay ku aasnayd Miino kuwa dhulka lagu aaso ah.
Illaa iyo hadda inta la Xaqiijiayay 10-ruux – ayaa ku Geeriyootay, Tiro kalna dhaawacyo ayaa kasoo gaaray, kuwaasoo lagu dabiibayo Isbitaalka guud ee gobalka Mudug iyo kan GMC ee Gaalakcyo; Waxaana la arkayaa Dad badan oo dhooban Goobaha Caafimaadka si ay dhiig ugu shabaan dadka dhaawacmay.
Sidoo kale, Dadka Qaraxyadan Geeriyooday ayaa waxaa ku jira taliyihii ciidamada Dowlada Hoose ee Degmada Gaalkacyo, Khadar Dhuubane, ku xigeenkiisa Cabdinuur Seerar, Askar ka tirsan Dowladda hoose ee Gaalkacyo iyo qaar ka mid ah shacabkii kusoo xoomay qaraxii koowaad.
Ugu dambeyntii, Qaraxyadaan oo dhacay waqti hore oo Saaka ah ilaa iyo hada ma jirto cid ka tirsan, maamulka degmada Gaalkacyo, kan Mudug iyo maamulka Puntland oo ka hadlay.